QM oo ka dayrisay xaalada dadka ku nool deegaanada Al-Shabaab gacanta ku hayso – Radio Daljir
Agoosto 22, 2015 7:11 b 0
August, 22, 2015 – Peter De Clercq Xiriiriyaha arrimaha gargaarka bini’aadminimo ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo ka soo laabtay safar uu ku tagay dhulka dhawaan laga qabsaday al Shabaab gaar ahaan degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor ee gobolada Gedo iyo Baay, ayaa ka dayriyey xaaladda dadka kunool deegaamada Shabaabku gacanta weli kuhayaan.
Wuxuu sheegay Peter De Clercq in deegaamada ay ururka Alshabaab maamulaan aysan mudo sanado ah helin adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay dadku u baahnaayeen sida caafimaadka, waxbarashada iyo gurmad dhanka cuntada ah.
Degmooyinka Baardheere iyo Diinsoor oo uu dhowaan booqday ayuu sheegay inuu kusoo arkay xaalado bini’aadanimo oo aad u liita, maadaama ay dadkii kunoolaa deegaamadaasi dhowaan ka qaxeen.
Ugu dambayntiina wuxuu beesha caalamka iyo hayadaha ka shaqeeya deegaanadaasi ugu baaqay iney caawinaad u fidiyaan dadka dhibaateysan, isagoo sheegay in dhibaatada ay sidoo kale heysato dadka xoolo-leyda iyo beeraleyda oo aan helin biyo toos ah.
Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Ansixiyey sharciga Hanti-dhowrka guud ee dalka